THBP: ရခိုင်စတိတ်ရှိုး အမှတ်တရ
ရခိုင်စတိတ်ရှိုးနိ အကြောင်းကို ပြောပါမေဒေ။ ညဇက ၂၀ရက်နိက။ အလုပ်ရှိယင့်သားနဲ. အမ်စီ ယူပြီးကေ လားလို.ကြည့်ခီစော်ပါ။ အဝတ်အစားအတွက်လေ့ အများကြီး စဉ်းစားပြီးကေ ဝတ်လားပါရေ။ ဟိုပေါ် အေပေါ်လို. အပြောမခံရအောင်၊ ရခိုင်သားတိ မေးမငေါ့ရအောင်လို.။ ယဂေ တက်က်စီနဲ.လားဖို.လို.။ ယေမှာ ဂျူရောင်း စာကြည့်တိုက်နားမှာဆိုလို. ရထားနဲ.ပဲလားခရေ။ ပူလိုက်တေဆိုစော်မှာ မပြောကေ့။ အေကိုရောက်ခါကပင် တခါလေ့ ရခိုင်လူအုပ်ထဲကို မလားဖူးခါ ကြောက်ပိုင် လန်.ပိုင်တော့ ဖြစ်နီရေ။
Informatic ကျောင်းထဲကို မဝင်ခင် မီးပွိုင့်မှာ လူတယောက်က လာလို.နှုတ်ဆက်ပါရေ။ မခိုင်ဝေဇံ မဟုတ်ပါလာ လတ်။ တခါလေ့ လေ့ မမြင်ဖူးပါ။ ဟုတ်ပါရေလို.။ ယေမှာ ကျွန်တော့ကို သိပါလာလတ်။ မသိပါလို. ပြောမှာ အေအမ်ပီကပါလတ်။ အော် ဓတ်ပုံ မတင်ရှိမေ။ ကိုယ်က တခါက မမြင်ဘူးပဲနဲ. သိပါလာဆိုလို. ဘဇောင်ရဖို.။ ဒိဗ္ဗစက္ခု ရနီစော်က မဟုတ်။ အော်ဟုတ်ပါယင့်ဆိုပြီးကေ နာမည်တောင် မမီးခရပါ။ မီးစိမ်းကေ ပရုံးနရုံးလမ်းကူးလို.ပြီးလာရရေ။
ရောက်စော်နဲ့ စားဖို.သောက်ဖို.လုပ်ကတ်ပါရေ။ လက်မှတ်ပြပြီးစော်နဲ. ထမင်းဘူးလာပီးပါရေ။ ဝက်သားနဲ.ခရမ်းသီးနဲ.။ မစားဖြစ်ခပါ။ အိမ်ကစားလာစော် ကောင်းဝမ်းတင်းနီလို.။ ဓါတ်ပုံတော့ရိုက်ယူခရေ။ လူတိ ဟိုနားမှာ တစု အေနားမှာ တစုနဲ. ကိုယ်မျက်နှာမြင်ဖူးရေလူတိ အများကြီး။ တချို.ကလည်း ပြုံးရုံပြုံးပြရေ။ တချို.ကလည်း ကိုယ့်ကိုချောင်းကြည့်ပြီးကေ ကိုယ်ကကြည့်ကေ မျက်နှာလွှဲလားကတ်ပါရေ။ အေအမ်ပီမှာ မြင်ဖူးစော်လူတိ (မမချေတိ အများစု) တွိကေလေ့သင့် တယောက်နဲ. တယောက်နှုတ်မဆက်ကတ်ပါ။ ရခိုင်သမတိ စိမ်းတုန်းပါသိ။ မိတ်ဖွဲ.ကို ကြောက်တုန်းပါသိ ထင်ပါယင့်။
ဓါတ်ပုံမြင်ဖူးရေလူတိ အများကြီးတွိပါရေ။ သိရေလူများနီခါ ဇာသူ.ကို နှူတ်ဆက်လို. ဆက်ရဖို.မှန်းမသိဖြစ်နီရေ။ ကိုယ်ရင်းရင်းနှီးနှီး သိရေလူ တယောက် နှစ်ယောက်လောက်နဲ. စကားပြောနီကတ်ပြီးကေ ကြည့်ဖို. အထဲကို ဝင်ကတ်ပါရေ။ ယဂေပွဲစရေမဟုတ်ပါလားယေ။ ရခိုင်သမချေက အယင်စလို. ဆီမီးခွက်ကပါရေ။ ယပြီးစော်နဲ. ဘုန်းလျှံထွက်လာပြီးကေ တေးခြင်းတပုဒ်ဆိုရေ။ ခန်းမက ကျယ်က ထိုဖက်ဒေဖက်လူထိုင်ပြီးကေ အလယ်မှာ ကချင်ဂေ ကလို.ရအောင်စီစဉ်ပီးထားပါရေ။ တယောက်လေ့ မရှိသိပါ အလယ်မှာ။ အော် မဟုတ်။ တယောက်တည်းရာရှိရေ။ လူတယောက်။ အေအမ်ပီမှာ မြင်ဖူးပိုင်တော့တွိယင့်။ တယောက်တည်းကနီရေ။ သူ.ကို ကြည့်ရစော် စင်ထက်က တေးခြင်းဆိုစော်လူထက်ပိုပြီးကေ ဈန်ဝင်နီပိုင်မြင်ပါယင့်။ ဘုန်းလျှံဆိုအပြီးမှာ ယုယုလှိုင်ထွက်လာရေ။ မီနီစကပ်အတိုချေနဲ. Fishnet Stocking ကိုဝတ်ပြီးကေပါ။ ဇိရှင်ကိုးကေ ဝတ်ပြုရေ တေးခြင်းကို စကပ်တိုချေနဲ. ပေါင်ကားပြီးကေ ဆက်ဆီကျကျ ကပြီးကေ ဆိုလားပါရေ။ အိမ်း အေတေးခြင်းချေကို ရိုးရိုးချေဆိုလို.မရလား အလူရို.။ တေးခြင်းကိုလေ့ အားနာကတ်ပါအုံးသိ။ တခါတည်း လက်လန်လားရေ။ ယေကေလေ့ ဘုန်းလျှံနဲ. ယုယုလှိုင် နှစ်ယောက်တည်းနဲ. ပွဲစည်အောင်လုပ်လားစော်ပါ။ သူရို. Showmanship နဲ. ပွဲထိန်းနိုင်မှု ကို ချီးကျူးရဖို.။
ယကေ စက္ကောမ အဖွဲ.ကိုက မသိ။ ယင်းဖက်တိနဲ. အဆက်ပြတ်လားစော်ကြာဗျယ်ဆိုခါ အသစ်ပေါ်စော်တိကို မသိလိုက်ဗျယ်။ ညဏ်မင်းသန်. နဲ.မင်းမင်း ဆိုပြီးကေအဆိုတော် ၂ယောက်ပါရေ။ ညဏ်မင်းသန်. က လေးဖြူအငယ်စားချေပိုင် အလှပချေ လို.မြင်ယင့်။ ယေကေလေ့ ဝရေ။ ခန္ဓာပြပြားပျင်လို.။ ချစ်တော့ ချစ်ကောင်းထမန်းချေဟေးလို. ယေကေလေ့ ဘော်ဒီကမလှလို. ပြောနီရေ သူငယ်ချင်းကို။ ခြသေ့င်္ဟိန်းနီပိုင်ရာ ကြားရရေ ကျန်စော် တခုလေ့နားမလည်။ အသက်ကြီးလားလို. ရှိဖို.။ ယင်းပိုင်တေးခြင်းတိကို ခံစားလို.ကောင်းမရဗျယ်။ ညဇဖက် အိမ်ရောက်မှာ သူငယ်ချင်း လှိုင်မီက အွန်လိုင်းမှာ မီးရေ ဟေး ငါ့မောင်ချေ တေးခြင်းဆိုစော်ကောင်းလာလတ်။ အသူလေ ဆိုမှာ ညဏ်မင်းသန်.ဆိုဝါ။ အဘာလေး လောကကြီးလေ့ ကောင်းအကျဉ်းချေရာမနား။
ဇာလောက်ပင်ခေတ်ပေါ်တေးခြင်းကောင်းကောင်း၊ ရိုးရာက မမကိုပြိုင်လို.မနိုင်ပါ။ စက္ကောမလေ့ မနိုင်။ တယောက်လေ့ နိုင်ဖို.မဟုတ်။ ဝင်းကိုခိုင် တေးခြင်းတိတောင်မနိုင်။ ဝင်းကိုခိုင် တောင်မနိုင်ဆိုခါမှတော့ ကျန်စော် လူတိ ထည့်လို.မစဉ်းစားကေ့ဖိ။ ရိုးရာက မမဆိုလိုက်စော်နဲ. ပရိတ်သတ်တိ ပြိုပါရေ။ ကိုယ်တောင်မှ ဝင်လို.ဆိုပခသိယင့်။ မနီနိုင်ထော။ စိမ်းညိုမှိုင်းကေ နွယ်ချိုဖိုးခေါင်ရိုးမတောင်လေ ဆိုစော်တေးခြင်းကို သတိရရေ။ တယောက်လေ့ မဆိုခကတ်။ ယင်းအဆိုတော် အခင်ဦးမောင်သိန်းလားမဆိုနိုင် အနည်းကောင်းမသိ။ သင်္ကြန်တေးခြင်းခွေတိမှာ လေ့ အားရပါးရ ကကောင်းစီကရေ အသံကလေ့ နောင်းလို.။ သူပါကေတော့ခါ ရခိုင်သားတိ ပြိုကတ်ဖို.။ ကိုယ်တောင်မှ ထလို.ကချင်ကဖို.သိ။ ဝင်းကိုခိုင်တယောက်မပါစော်ကို အဂေါင့်စိတ်မကောင်း။ စကားမစပ် ဝင်းကိုခိုင်လပျိုပါလာ။ မယားယူရေ ဘာညာမကြားလို.ပါ။ လပျိုဆိုကေ မယားလျှာ လျှောက်လွှာတင်ဖို.လားဖို.။
ရခိုင်ဝတ်စုံနဲ. မောဒယ်ရှိုးပွဲ (မမချေတိကို အသေအချာမမြင်ရစော် ဆောရီးပါ။ ကျော်ဖြိုးဝေ အပြစ်။ မမချေတိကို အသေအချာမရိုက်)
အဆိုတော်တိ ဆိုစော်ထက် ပရိသတ်ကြိုက်စော် အစီအစဉ်က မော်ဒယ်ရှိုးပါ။ မမချေတိ ထွက်လာကေ ယောက်ျားချေအားလုံး စင်ရှိကိုပြီးလခကတ်တေ မြင်ယင့်။ ကိုအောင်မြတ်ကျော် အနောင်ဆာလုပ်စော် ကောင်းပါရေ။ ပရိတ်သတ်ကို ပွဲစည်အောာင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆွဲခေါ်လားစော်ကို တွိပါရေ။ ကျန်စော်သုံးယောက်ကို တော့ မကြိုက်ပါ။ ကိုဇော်ဇော်ဝင်းရို. မော်ဒယ်ဘွိုင်းလုပ်စားလို.ရပါဗျယ်။ အရပ်နည်းနည်းရှည်ကေ ကိုထွန်းအေးကျော်သေချာပေါက် မော်ဒယ်ဖြစ်ပါရေ။ နောက် ကိုကျော်မျိုးထွန်းလားမသိ formal ဝတ်စုံနဲ.တယောက်လည်းသင့် ခန်.လို.မြင်ယင့်။ ရခိုင်ဝတ်စုံနဲ. လျှောက်တေ အခေါက်ကို တော့ သဘောမကျ။ ခေတ်ဝတ်စုံနဲ.လျှောက်ခါတော့ ကြည့်လို.ကောင်းကတ်ပါယင့်။ မမချေတိကတော့ အားလုံး အလှအပချေတိပါ။ မမချေတိထဲမှာ ရခိုင်ဝတ်စုံနဲ.လျှောက်ခါပါရေ ကလေ့မေချေ တယောက်ကို ကောင်းသတိထားမိပါရေ။ ၄ယောက်မြောက်ပါ။ ကောင်းချစ်ကောင်းထမန်းချေ။ ကျန်စော် လူတိက တယောက်ကိုလေ့ မကြည့် တိုင်းလို.လျှောက်လခရေ။ သူက ပရိတ်သတ်ဖက်ကို ကြည့်ပြီးကေ ရယ်လို.ပြုံးလို.ချေ လျှောက်လခစော် ကောင်းမျက်နှာချိုရှိရေ။ ခေတ်ဝတ်စုံနဲ.လျှောက်ခါ ဒုတိယမြောက် ကလေ့မေချေဝတ်ထားရေ Angel Inspire ဂါဝန်အဖြူချေကို သဘောကျပါယင့်။ညမချေ အေးမြတ်မွန်ကတော့ခါ Confidence အပြည့်နဲ. ဖျော်ဖြေလားပါရေ။
ကိုကျော်ဝင်းခိုင်ရို. ကိုဇော်ရီရို.ကို အပြင်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်တွိဖူးပါရေ။ ကိုကျော်ဝင်းခိုင်ကို အေအမ်ပီက ဓါတ်ပုံမှာမြင်ခါ အသက် ၄၀ ရှင်လောက်ထင်စော်။ ဇာဟုတ်ဖို.လေး။ အငယ်ပါသိ။ ကင်မရာမန်းလုပ်နီစော်လူကိုလေ့သင့် မြင်ဖူးပိုင်တွိရေ။ ကင်မရာကိုင်ပြီးကေ စင်ထက်တက်လိုက်၊ စင်အောက်ဆင်းလိုက် ၊ ခုံထက်ကိုတက်လိုက် နဲ.ပင် သူ.ခမျာ ရိုက်စော် ရိုက်စော်။ ကြမ်းပြင်မှာ ဖပြားသတ်တိမှောက်လို. ၊ မျက်နှာကျက်မှာ ပြောင်းပြန် ခြေထောက်တိချိတ်လို. မရိုက်စော်ကို ကျေးဇူးတင်ရဖို.။ Eligible Bachelor တိဖြစ်တေ ကျော်ဖြိုးဝေ ရို. စိုးမိုးရို.လေ့တွိခပါယင့် ဟန်ရေးတပြပြနဲ. (စစော်ရာဒေ)။
တခုတော့ ရှိပါရေ။ ပရိတ်သတ်ထဲက ရခိုင်သမထဲမှာ အလှပလှ ရှာကြည့်စော် အများမတွိပါထော။ ညီမချေ အေးအေးသော်ကတော့ ကကောင်းအလှပလှ မြင်ရေ။ ညီမချေ ဇံဇံကတော့ ကကောင်းဖော်ဖော်ရွေရွေပါ။ နှုတ်ဆက်ပြီးကေ စကားပြောနီခကတ်တေ။ သူ.ကိုတောင် မှ အိမ်သာလားခါ အိတ်တခေါက်ချေစောင့်ဖို. အကူအညီတောင်းခရပါသိရေ။ အမှန်က မော်ဒယ်ရှိုးကို သူဝင်လို.လျှောက်ရဖို.စော်။ ဒေါင်ကကောင်းနဲ. ယလောက်ဘော်ဒီလှစော်ကို။ ကျန်စော်ရခိုင်သမတိကို တော့ခါ အသေအချာကြည့်ဖို. အချိန်မရခလို.လားမသိ။ မမြင်ခပါ။ ကိုယ်လှလို. ဝေဖန်နီစော်မဟုတ်ပါဒေ။ အမှန်ပြောစော် မကျေနပ်ကေလေ့ မတတ်နိုင်ဗျယ်။ အေဘလော့ပို.စ်တင်ပြီးကေ စီဘောက်စ်ကို ဖျက်ဖို.လားဖို.။ ဆဲဖို.စော်ကြောက်လို.။ ဇာပိုင်ပင်ပြောပြော အဂုပိုင်ပွဲတပွဲဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ပီးစော်ကို ကောင်းကျေးဇူးတင်ရပါဖို.။
ဓါတ်ပုံရှိစော်တိကို အယင်တင်ပီးလိုက်ပါရေ။ နောက်ကျော်ဖြိုးဝေပက ရခါမှ ထပ်လို.တင်ပါဖို.။
ဇိရှင်ကိုးကေ ဝတ်ပြုရေလတ် အေဝတ်စုံနဲ.
Clearer Version. Nice tattoo.
စက္ကောမ Nice Focus huh?atotal failure..
ဓါတ်ပုံတိကို ထောက်ပံ့ပီးရေ ကျော်ဖြိုးဝေကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါရေ။
နောက်ပိုင်း သိရစော် က အကျွန်ချစ်ကောင်း ထမန်းချေလို. ပြောရေ နံပါတ်လေး မမချေ (ခိုင်ဥမ္မာထွန်း) နဲ. ကောင်း ခန်.ရေလို.ပြောခရေ ဘရို ကျော်မင်းထွန်းရို. ရခိုင်စတိတ်ရှိုးပြီးလို. နောက်တရက်နိမှာ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တေလို. ပြောပါရေ။ ကောင်းလိုက်ဖက်တေ အတွဲပါ။ အကျွန်ရို. ရခိုင်သား ရခိုင်သမ မှာ လှရေလူရှားရေ။ အေပိုင်အလှပ စုံတွဲ ဖူးစာပါကတ်စော်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီးကေ တခုတောင်းဆိုလိုက်မေ။ အချေ အလှပ ၁၀ ယောက်လောက် တခေါက်မွီးပီးပါ ပလင်။ အချေတိ ကောင်းအလှပတိရှိပါဖို.။ အားကျ ဝမ်းသာရအောင် ဓါတ်ပုံကိုပါတင်ပီးလိုက်ပါရေ။
ဓါတ်ပုံကို အေအမ်ပီမှ ကူးယူဖော်ပြပါရေ
This entry was posted on 8:22 AM You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.